Imidlalo yeCastle Premier soccer League Iyaqhubeka Limpelasonto
Nkwenkwezi 09, 2014
BULAWAYO — Imidlalo yenguqu esigabeni se Castle Premier Soccer League iqhubekela phambili kulimpelaviki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kwamaqembu ahlezi phezu kwengalane yemiklomelo iHighlanders kanye le ZPC Hwange.
Zombili iZPC Kariba kanye le Highlanders yiwo kuphela amaqembu angazake anqotshwe selokhu kuqale imidlalo yalonyaka kusigaba sePSL njalo inengi labalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni ngemva komdlalo ozadlalwa yilawa maqembu ngeNsonto enkundleni yeGwanzura.
Lawamaqembu ahlezi phezu kwengalane elemiklomelo elitshumi lambili ngemva kwemidlalo eyisithupha kodwa ilanga langeNsonto lilakho ukufika kube lenguquko kusimo sengalane njengoba imidlalo iqale namhla ngomdlalo obuphakathi kwe Harare City leqembu le Triangle.
NgoMgqibelo iqembu le CAPS United lizadibana lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium, iqembu le Chiredzi lizadlala lele Chapungu enkundleni yeChishamiso kuthi kontunthu iqembu le Chicken Inn lizemukela ele How Mine enkundleni ye Luveve.
Kweminye imidlalo yangeNsonto iqembu le Shabanie Mine lizangqikilana lele Dynamos enkundleni yeMaglas, iBuffaloes izadlala le FC Platinum enkundleni yeSakubva kuthi emalahleni iqembu le Hwange lizemukela ele Bantu Rovers.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu imidlalo ifika komlindi uyacina kulimpelaviki kusigaba se Barclays English Premier Football lapho umncintiswano wokuphakamisa isicoco ophakathi kwamaqembu athi ele Manchester City kanye lele Liverpool.
Iqembu le Manchester City yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamatshumi ayithoba minwe mbili lantathu (83) kuthi ele Liverpool likundawo yesibili njalo litshiywe ngele City ngemiklomelo emibili.
Iqembu le Manchester City lizadlala lele West Ham kuthi ele Liverpool lizadibana lele Newcastle njalo yonke imidlalo ezadlalwa kulimpelaviki izakuba khona ngeNsonto ngehola lesithathu emini.
Lokhu kungoba abaqoqa limidlalo bezama ukuvikela ukuqilibezela okungenziwa nagmaqembu kumncintiswano wokuphakamisa nkezo kanye lalowo owokubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu wona ogoqela maqembu athi iWest Brom kanye le Norwich City ikanti iCardif kanye le Fulham kuvele sekusobala ukuba azabe edlala kusigaba sangaphansi kusizini ezayo.
Imidlalo yesigaba saphezulu ifika komlindi uyacina laselizweni lase South Africa lapho amaqembu azadlala imidlalo yokucina kusasa ngoMgqibelo kodwa intshansthu zemidlalo yalonyaka sezivele sizisaziwa njengoba iqembu le Mamelodi Sundowns lifikise inani lemiklomelo elingeke lifinyelelwe ngamanye amaqembu ngokunqoba elikwenze ele Supersport ensukwini ezedluleyo.
ISundowns ilemiklomelo engamatshumi ayisithupha lane kuthi iqembu elikundawo yesibili ele Kaizer Chiefs lile miklomelo engamatshumi ayisithupha kuphela okutsho ukuba lingaze linqobe kusasa alingeke lifikise inani elile Sundowns.